Socdaalkii Cagaaraa Oo Wardheer Soo Gaadhay - Cakaara News
Socdaalkii Cagaaraa Oo Wardheer Soo Gaadhay
Wardheer(CN) Khamiis, 3dii December 2015, kadib dheelmashadii xalay ee bookh ayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigiisu saaka ujahaysteen dhanka degmada Wardheer ee xarunta gobolka doolo.
Madaxwaynaha iyo waftigiisa oo gardaadinaya socdaalkii cagaaraa ayaana xili duhurkii kubeegan soo gaadhay xarunta gobolka Doolo ee magaalada wardheer oo si diiran uu shacabka wardhdeer oo aan ukalahadhin mudana sugayay oo dhagta kalasocday socdaalkan ugu soo dhaweeyay halkaasi.
Hadaba galitaankii magaalada ayaa iyadoon meel kale lagu leexanin uu madaxwaynuhu dhagax-dhigay bilaabida mashruuca dhismaha kuliyada farsamada gacanta isagoo hadal kooban oo waxtarka kuliyada farsamadu u yeelan doonto shacabwaynaha gobolka kasoo jeediyay.
Nasasho qado ah kadibna, madaxwaynaha oo ay weheliso waftiguu hogaanka u hayay ayaa kulan balaadhan oo ay kasoo qaybgaleen odoyaasha, hooyooyinka, dhalinyarada, maamulka gobolka, kadegmada, shaqaalaha xafiisyada kaladuwan iyo marti sharaf kale kulaqaatay guriga shirarka ee magaalada wardheer.
Kulankan ayaa waxa uu madaxwaynuhu kaga waramay sooyaalkii taariikheed ee deegaanka soo maray guud ahaan isagoo gaar ahaana carabka kudhuftay caqabadihii kajiri-jiray dhanka nabadgelyada, horumarka iyo maamulka suuban, isbadalada yimid iyo sababtay kuyimaadeen, guulaha kadhashay isbadalada dhanka nabadgelyada ay maanta cid walba oo deegaanka ahi ku naaloonayso, tabihii cilmiyaysnaa ee loo dajiyay qorshayaasha horumarka xawliga kusocda kadib markii nabadgelyada meel lasaaray iyo waliba qorshayaasha xukuumada ee nidaamka isbadalka iyo koboca dhaqaalaha ee wareega 2,aad.
Dhanka kalana, shacabka degmada wardheer ayaa kamarkhaati kacay in isbadalka iyo waxqabadka xukuumada ee 5tii sano ee lasoo dhaafay uu yahay mid aan cidina daah kasaarayn oo ay aad ugu diirsadeen . Balse wixii kahoreeyay xiligaas aysan kajirin deegaanka wax dawladnimo ah habayaraatee.
Ugudanbayna, madaxwaynaha iyo waftiga ayaa caawa udheelman doona magaalada wardheer iyadoo kooxihii fankuna ay katumi doonaan halkaasi